Ciidamada DKMG ah oo howlgalo baaxadleh ka wada magaalada Muqdisho – SBC
Ciidamada DKMG ah oo howlgalo baaxadleh ka wada magaalada Muqdisho
Posted by Webmaster on November 13, 2011 Comments
Suuqa weyn ee bakaaraya ayaa waxaa gudaha u galay ciidamada Amaansugida Dowlada KMG ah ee Soomaaliya kuwaas oo halkaasi ka sameynaya baaritaano xoogan oo ay ku baarayaan hubka cul culus iyagoona gudaha u galaya baqaarada magaaladaas.
Ciidamada ayaa sida la sheegay waxa uu howlgalkoodu ku aadanyahay dabagalka jiritaanka hub qarsoodi ah oo xoogaga xarakada Shabaab Almujaahidiin ay ugu jiraan baqaarada Suuqaasi .
ciidamada Ayaa ku amray Ganacsatada in aanay wadan karin Hub sharci daro ah, ganacsadihii lagu arkaana laga qaadayo talaabo sharciga waafaqsan.
dhowaan Howlgalo ay sameeyeen ciidamada Dowlada waxa ay gacanta ku soo dhigeen Hub sharci daro ah taas oo ay ka soo qabteen baqaaro ku yaala degmada Howlwadaag, hubkaas oo isugu jiray kuwa Culus iyo kuwa Fudud.
Sikastaba ha ahaatee Howlgalada ciidamada DKMG ah ayaa ah mid si joogto ah uga socda goobaha suuqayada iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada kuwaas oo ay ciidamada kubaadigoobayaan hub ka sharci darada ah .
waxaan rajaynaynaa in Muqdisho ay nabad noqoto, oo kala dambayntii iyo cadaaladii dib usoo laabato Nabad & Xasiloonina ay Dalka ka dhalato, Ilaahay waxaan ka baryaynaa Dawlad Islaami ah oo Caadil ah, iyo inuu dhibaatada & Dulliga na haya naga kor qaado wax ka wanaagsana noogu baddalo